२० करोडकाे घुस काण्ड : दुर्गा प्रसाईँले फेरि खाेतले रहस्य (भिडियाेसहित) « Janata Samachar
२० करोडकाे घुस काण्ड : दुर्गा प्रसाईँले फेरि खाेतले रहस्य (भिडियाेसहित)
भन्छन्– प्रमाणसहित सर्वोच्च अदालत जान्छु
दुर्गा प्रसाई, बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक । नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकरणको क्रममा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएपछि केही महिना निकै चर्चामा रहनुभयो । डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन आन्दोलनले तयारी पूरा भएर पनि दर्जन भन्दा बढी मेडिकल सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । प्रसाईँ सञ्चालक रहेका बी एण्ड सी मेडिकल कलेज पनि त्यहीकारण रोकिएको छ ।
प्रसाईँ बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सञ्चालन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले अनेक तवरले प्रयास गरिरहनुभएको छ । प्रसाईँले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाउनुभयो । त्यसपछि उपाध्यक्ष गिरीले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘त्यसमा सत्यता नभएको’ भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको छ । आफूमाथि २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएपछि गिरीले प्रसाईलाई ‘विकृत मनस्थिति भएका व्यक्तिले लगाएको आरोप हो, यसमा सत्यता छैन’ भन्नुभएको छ । २० करोड घुस प्रकरणले यतिखेर प्रसाई र गिरीबीच कटाक्ष चलिरहेको छ ।
कलेज सञ्चालनको अन्तिम अनुमति नपाउँदा प्रसाईको करिब ६ अर्ब रुपैयाँँ डुब्ने अवस्था छ । प्रसाईले कलेज सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिको लाग आफू सर्वोच्च अदालत जाने जनाउँ दिनुभएको छ ।
जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बिशेष संवाद’ गिरीले बी एम. सी मेडिकल कलेज संचालन गर्न खोज्दा विभिन्न पक्षबाट आफूले भोगेको समस्या खुलस्त पार्नुभएको छ । प्रसाईले आफूले कहिले पनि कसैलाई घुस नदिएको दाबी समेत गर्नुभएको छ । तर आफूकहाँ शरण लिन आउने जो कोहीलाई खाली हात भने नफर्काएको उहाँको भनाइ छ ।
बि एण्ड सी